Ny fampiharana 8 tsara indrindra hahitana holatra misy sary | Androidsis
Ignacio Sala | 29/07/2021 18:00 | Fampiharana Android
Ianao ve mpitia fihazana holatra izay manana olana amin'ny famaritana ny sakafo ara-tsakafo? Misy fampiharana famantarana holatra maro ho an'ny Android izay afaka manampy anao hanavaka holatra azo hanina amin'ny poizina. Ireo fampiharana manarona karazana holatra rehetra mety ary tsy manome fampahalalana amin'ny antsipiriany momba azy rehetra izy ireo.
Ny zavatra tsara indrindra momba ireo rindranasa ireo dia ny fampisehoana aminao sary maromaro isaky ny holatra mba hahafahanao mahazo antoka fa io ilay tadiavinao. Ny rindranasa sasany aza mamela anao hahita holatra amin'ny alàlan'ny fakana sary na fampakaranao azy. Raha te hahafantatra ny inona ianao fampiharana tsara indrindra hamantarana holatra, Manasa anao aho hamaky hatrany.
1 Mpamaritra holatra
3 Mpamaritra holatra - fitiliana sy fanasokajiana
4 Holatra - Famantarana ny holatra
5 Holatra 2
6 Bolets Holatra - Mushtool
7 Shroomify - Famantarana ny holatra
8 Bokin'ny holatra
Ny mpamantatra ny holatra dia mamela antsika hamantatra izay holatra hitanay maka sary tsotra, sary iray izay mampitaha angon-drakitra malalaka manome antsika ny valiny mitovy indrindra amin'ilay sary miaraka amin'ny fampahalalana amin'ny antsipiriany momba ny fampiasana gastronomic (raha tsy misy poizina), ny loko mampiavaka azy, holatra mitovy amin'izany ...
Ho fanampin'izay, raha te-hanitatra ny fahalalantsika isika, dia mametraka antsika a lalao mahafinaritra izay mampiseho sary holatra sy safidy telo hamaly. Izy io koa dia hanampy antsika hamantatra ireo fepetra tsara indrindra hanangonana holatra amin'ny faritra misy antsika.
Mushroom Identify dia azo alaina ho an'ny misintona maimaim-poana, misy doka sy fividianana ao anaty rindrambaiko hamaha ireo fiasa rehetra atolotray antsika. Tsy toy ny rindranasa hafa izay toa adino ao amin'ny Play Store, havaozina tsy tapaka ity rindranasa ity ary manampy karazana vaovao.
Famantarana holatra - famaritana mandeha ho azy
Misaotra ny betsaka noho Sary 2.000 tafiditra ao anaty fampiharana, azontsika atao ny mamantatra ireo holatra miaraka amin'ireo karazany maherin'ny 500. Ho fanampin'izany, mamela antsika hamorona angon-drakitra manokana miaraka amin'ireo toerana misy ny holatra hita amin'ny alàlan'ny GPS an'ny finday avo lenta, mamorona faritra fijinjana.
Tsy mila fifandraisana Internet ary amin'ny Espaniôla ny fangatahana. Ny Fungipedia dia noforonin'ny Fungipedia Mycological Association, noho izany dia fantatr'izy ireo vetivety ny holatra sy ny hafa, na dia tsy nohavaozina nandritra ny 4 taona mahery aza. Ity fampiharana ity dia misy ao amin'ny Play Store amin'ny vidiny 6,99 euro.
Developer: Fikambanan'ny mycological Fungipedia
Mpamaritra holatra - fitiliana sy fanasokajiana
Mamela antsika hahafantatra ny holatra fantaro amin'ny alàlan'ny fakantsarin'ny fitaovantsika karazana holatra marobe. Raha vantany vao fantatra dia mampiseho amintsika ny mombamomba ny toetrany, ny gastronomy, ny karazany, ny lokony ... Ny holatra tsirairay izay fantatsika amin'ny fampiharana dia azo tehirizina ao anaty tahiry tsy miankina.
Manolotra antsika ny tsara indrindra koa faritra azo angonina miaraka amin'ny vanim-potoana mety indrindra amin'ny taona hahafahana mahita ny tsirairay amin'ireo karazana 100 mahery eken'ny fampiharana.
Ity fampiharana ity misy amin'ny kinova roa: iray maimaim-poana miaraka amin'ny doka sy dikan-karama izay manana vidiny 5,99 euro.
Holatra - Famantarana ny holatra
Fungus mampiasa algorithma fanaovana tsikombakomba artifisialy mba hahafantarana ilay holatra resahina ao amin'ny tahiry misy azy, misy holatra maherin'ny 12.000 voasokajy ho karazana 1.800 amin'ny alàlan'ny fakantsarin'ny fitaovantsika. Raha tiantsika ho marina araka izay azo atao ny famantarana azy dia tsy maintsy maka sary ireo holatra misy jiro tsara sy amin'ny fomba fijery samy hafa isika.
Ity fampiharana ity dia ahafahantsika mamorona tantaram-pikarohana miaraka amin'ireo sary nalainay mba hahafantarana azy ireo. Raha vantany vao hitanao ilay holatra resahina, hasehony antsika ny rakitra Wikipedia mifandraika amin'izany izay ahafahantsika mahita ny fampahalalana rehetra mety ilaintsika amin'izany fotoana izany, ny tena zava-dehibe dia ny venna na tsia.
Fungus - Fungus Identification dia misy ho anao misintona maimaim-poana ary misy doka fa tsy misy fividianana fampiharana.
Ao amin'ny Setas 2 dia hahita mpitari-dalana feno ianao manampy hamantatra holatra amin'ny karazany 2000 mahery voasokajy ho karazany 300. Ny rakitra isaky ny holatra dia misy rakitra lehibe iray, ny anaran'ilay karazana amin'ny fiteny 11 ary misy lalao quiz hampiharana ny fahalalantsika.
Mamela antsika karoka amin'ny fisehoana, loko, habe, tsiro, na azo hanina na tsia, ho an'ny fianakaviana misy azy ireo, ny vokany mahasoa, izay singa natiora maniry ...
Mushroom Bolets dia misy ao a kinova maimaim-poana miaraka amin'ny doka ary kinova hafa andoavam-bola tsy misy doka izay manana vidiny 11,99 euro.
Holatra 2 LITE
Holatra 2 PRO
Bolets Holatra - Mushtool
Ny tena tanjon'ity fampiharana ity dia ny hanolotra anao ny torolàlana feno indrindra ho an'ny holatra rehetra azonao eritreretina fa misy motera fikarohana ahafahantsika mikaroka amin'ny anaran'ny holatra, ny karazany, ny endrik'ireo kaopy ary na ny loko aza.
Ny holatra dia misy a famaritana amin'ny antsipiriany, miaraka amin'ny anarany ara-tsiansa, ny lokony, ny endriny ary ireo singa hafa izay afaka manampy antsika hanaiky holatra mora foana, ao anatin'izany ny fampahalalana raha azo hanina na misy poizina.
Ny fampiharana dia misy fizarana kahie ahafahantsika tahirizo ny sary holatra manangona izahay ary manoratra ihany koa ny eritreritsika, fikafika ... Ankoatr'izay dia misy lahatsoratra miaraka amin'ireo fomba fahandro sy tetika tsara indrindra mahandroana holatra tsara.
Mushroom Bolets dia misy ao a kinova maimaim-poana miaraka amin'ny doka ary kinova hafa andoavam-bola tsy misy doka izay manana vidiny 2,39 euro.
MushToolPro - Mushroom Bolets
Shroomify - Famantarana ny holatra
Raha tsy misy amin'ireo fampiharana teo aloha nanampy antsika hamantatra ireo holatra izay misy eo amin'ny tontolo iainantsika dia tsy maintsy misafidy rindranasa toy ny Shroomify isika, fampiharana izay Amin'ny teny anglisy ihany ary izany dia ahafahantsika mahita holatra mahazatra 400.
Ny anaran'ny holatra izay mamaritra ny fampiharana, koa aseho amin'ny latina, noho izany dia afaka mitodika any amin'ny Wikipedia haingana isika hahalala ny fananana manokana raha tsy manana fahalalana firy amin'ny fiteny Shakespearean isika.
Ny rindranasa dia mamela antsika hiditra amin'ny tahiry lehibe ahafahantsika miditra karohy amin'ny anarana, endrika sy loko. Shroomify dia azo alaina maimaim-poana, tsy misy doka izany fa raha mividy ao anaty ny fampiharana ianao mba hamaha ny fidirana amin'ireo fiasa rehetra atolotray antsika (izay tsy vitsy).
Manome vaovao ho anay momba ny karazana holatra mihoatra ny 300 ilay rindranasa, manana fampiasa tena azo ampiharina sy mora ampiasaina izy io izay ahafahan'ny mpampiasa mampiasa ny olona amin'ny sokajin-taona rehetra dia mandray azy io haingana. Izy io dia ahitana motera fikarohana ahafahantsika mikaroka amin'ny anaran'ny holatra, amin'ny karazany ary na amin'ny faritra ahitanao azy.
Ny holatra rehetra azon'ilay fampiharana fantarina dia miaraka aminy sary maromaro mampiseho ny holatra amin'ny lafiny samihafa amin'izay izahay matoky fa ilay holatra miseho eo amin'ny écran no tena hitanao amin'ny tena fiainana. Ny rakitra tsirairay dia misy fampahalalana amin'ny antsipiriany momba ny holatra, ao anatin'izany ny vanim-potoana mety hanangonana azy, ireo faritra izay isehoan'izany matetika, fampiasana gastronomika ...
Toy ny fampiharana teo aloha, misy Book of Holatra amin'ny anglisy ihany, farafaharatsiny amin'ny fotoana namoahana ity lahatsoratra ity.
Book of Holatra dia misy amin'ny kinova roa: maimaim-poana miaraka amin'ny doka sy iray karama tsy misy doka izay manana vidiny 2,19 euro.
Bokin'ny holatra PRO
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Ny fampiharana 8 tsara indrindra hahitana holatra misy sary